मलेसियामा ओमिक्रोनको दोस्रो केस फेला, कामदारलाई सुरक्षित रहन आग्रह ! - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा ओमिक्रोनको दोस्रो केस फेला, कामदारलाई सुरक्षित रहन आग्रह !
नाइजेरियाबाट फर्किएकी एक आठ वर्षीया मलेसियाली बालिकामा मलेसियामा कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्टको दोस्रो केस भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
डिसेम्बर ५ मा आइपुगेकी युवती र उनको परिवारमा गरिएको पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पिसीआर) कोविड-१९ परीक्षणमा चिकित्सा अनुसन्धान संस्थानले गरेको जीनोटाइपिङ एसेसबाट ओमिक्रोनमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलेसियाले डिसेम्बर ३ मा पहिलो पटक ओमिक्रोन संक्रमणको पुष्टि गरेको पुष्टि गरेको थियो, जुन नोभेम्बर १९ मा मलेसिया आएका एक विदेशी विद्यार्थीमा पत्ता लागेको थियो। मलेसिया स्वास्थ्य मन्त्री खैरी जमालुद्दीनले ओमिक्रोनका अन्य १८ शंकास्पद केसहरू पनि छन्, जसको जीनोमिक अनुक्रम पुष्टि हुन बाँकी छ। १८ शंकास्पद केसहरूको नतिजा भोलि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशमै र;क्सी कारखाना चलाउने दुई नेपाली पक्राउ, ४८ ड्रम र’क्सी र पे’स्तोल बरामद
कुवेत । कुवेतमा अ’वैध म’दिरा कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका दुई नेपाली पक्राउ परेका छन्। कुवतेको गृह मन्त्रालयलाई गराइएको जानकारीअनुसार सुलैबिया क्षेत्रको एक घरमा २४ वर्ष र २७ वर्षका दुई नेपालीले म’दिरा कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यसलगत्तै उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सो म’दिरा कारखाना सञ्चालनमा कुवेतको औषधि नियन्त्रण विभागमा कार्यरत एक ५४ वर्षीय सैनिकको हात रहेको समेत बताइएको छ।
गृहमन्त्रालयले त्यहाँ छापा मार्ने क्रममा चो’री गरिएका हुन सक्ने २६ वटा भेडा, एक थान पे’स्तोल, ४ थान क्लिप, १०० थान गो’ली, ४८ ब्यारेल भरिएको स्वदेशी म’दिरा, ८ थान आयातित मदि’राका बोतल, कार्टुन, झोला,म’दिरा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने सामग्री बरामद भएको छ । त्यस्तै, बो’क्सीविद्या (टुना’मुना) गर्न प्रयोग हुने श’ङ्कास्पद उपकरण पनि फेला परेको बताइएको छ। पक्राउ गरिएका ती सबै अभियुक्तहरुको सन्दर्भमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। प्रवासखबर डटकम मा खबर छ !